ओलीले थाले चीनको काखबाट भारतको पाउ तर्फको यात्रा | Gundruk Khabar
ओलीले थाले चीनको काखबाट भारतको पाउ तर्फको यात्रा
काठमाडौं, ६ कात्तिक । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मुलुकलाई दुर्घटनातर्फ लैजान्छन् भन्ने पूर्व आकलनले आकार लिन थालेको छ। कहिले चीनको पोल्टामा त कहिले भारतको पाउमा गरेर ओलीले नेपालको विदेश नीति तहसनहस पार्दै लगेका छन्।
नेपालको विदेश नीति कति ध्वस्त बनाइयो भन्ने भारतका गुप्तचरहरुले गरेको खुलेआम नेपाल भ्रमणले पनि देखाएको छ। भारतीय गुप्तचर संस्था रिसर्च एण्ड एनालाईसिस विङ ‘रअ’ का प्रमुख सहितको टोलीले सीधै प्रधानमन्त्री केपी ओलीसँग भेटेको छ।
सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) चीन निकट देखिँदै आएकोमा अहिले भारत रिझाउने गतिविधिमा लाग्न थालेको देखिएको छ। मन्त्रीमण्डलमा गरिएको पछिल्लो हेरफेरबाट ओली सरकार अब भारततिर लम्पसार पथमा लाग्ने संकेत मिलेको थियो। लगत्तै भारतीय सेना अध्यक्षको नेपाल भ्रमणको मिति टुंगो लाग्यो भने रअका प्रमुखले पनि खुलेआम नेपाल भ्रमण गरेका छन्।
नेपालका दुई छिमेकी चीन र भारत बीचको संघर्षको असर नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा समेत महसुस गर्न थालिएको छ। यो संवेदनशील विषयमा प्रधानमन्त्री ओलीले एकदमै हलुका कूटनीतिक रवैया अपनाएको आरोप लाग्दै आएको छ।
चीन-भारत सीमाक्षेत्रमा सैन्य संघर्ष लम्बिदै जाँदा यतिबेला नेपालमा दक्षिणी छिमेकी भारतको चासो र सक्रियता ह्वात्तै बढेको हो। चीनसँगको उसको तनाव चर्किंदै जाँदा सुरक्षा स्वार्थलाई प्राथमिकतामा राखेर भारतले दिर्घकालिन रणनीतिक चासो परिपूर्तिका लागि नेपालमा आफ्नो सक्रियता ह्वात्तै बढाएको हो।
भारतीय गुप्तचर प्रमुख तथा त्यहाँका सुरक्षा सल्लाहकार अजित डोभलले केही महिना पहिले गोप्य नेपाल भ्रमण गरेका थिए। उनीहरु नेपाल सहित भुटान, म्यानमार, लाओस, भियतनाम लगायतका देशमा गोप्य भ्रमणमा गइरहने गरेको भारतीय सञ्चार माध्यमहरुले लेख्ने गरेका छन्।
प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्रीमण्डल हेरफेर गरेर रक्षा मन्त्रालय आफैंसँग राखेका थिए भने सोहि दिन भारतीय सेना प्रमुख मनोज मुकुन्द नरबाणे नेपाल आउने मिति घोषणा गरिएको थियो।
नेपालको राजनीतिमा यो घटनाको महत्त्वपूर्ण अर्थ छ। यिनै घटनाक्रमबाट प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारले विदेश नीतिको केन्द्र चीनबाट ’सिफ्ट’ गरेर भारत केन्द्रित गरेका छन्। यस बारेमा गुन्द्रुक खबरले यस अघि नै लेखिसकेको छ।
भारतका सेनापति एम. एस. नरवाणेको नेपाल भ्रमणको दुई साता मात्र बाँकी रहँदा अचानक बुधवार भारतीय खुफिया एजेन्सी ‘रअ’ का प्रमुख सामन्तकुमार गोयलले विशेष विमानबाट नेपाल आएका हुन्। लकडाउनको समयमा पनि गोयल सहितका भारतीय सुरक्षा अधिकारी पटक पटक नेपाल आएर फर्किएको समाचार प्रकाशित भएका थिए।
विगतमा नेपालको गोप्य भ्रमण गर्ने भारतीय खुफिया एजेन्सीका प्रमुख अहिले खुलेआम आउन थालेकाछन्। यसरी खुलेआम भ्रमण गरेर भारतले नेपालमा आफ्नो पुरानो प्रभुत्व तथा दबदबा पुर्नस्थापित भइसकेको सन्देश दिन खोजेको हुनसक्ने जानकारहरु बताउँछन्।
रअका प्रमुखको अहिलेको भ्रमण यसकारण पनि अर्थपूर्ण बन्छ कि उनी आएकै प्रधानमन्त्री ओलीले राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को बैठक राखे। भारतीय सेनाध्यक्षको भ्रमण मिति तय हुनु, गुप्तचर प्रमुख आउनु र सुरक्षा परिषद्को बैठक राखिनु संयोग मात्र होइन सुनियोजित हो भन्छन् जानकारहरु। तारतम्य मिलाएरै यी सब काम भइरहेको आधार देखिन पनि थालेको छ।
सर्वसाधारण नेपाली जनताले ’रअ’ प्रमुख गोयल नेपाल आउँदैछन भनेर बुधवार अपरान्ह समाचार मार्फत थाहा पाएपनि नेपालको राज्य संयन्त्रलाई यसबारे पुर्व जानकारी हुन्छ नै । उनी आउने तयभएपछि देशको राष्ट्रिय परिषद्को बैठक राखेर ओलीले भारतलाई के आश्वस्त गर्न खोजेका हुन् भन्ने प्रष्ट रुपमा बाहिर आईसकेको छैन।
तर, एउटा कुरा चै प्रष्ट देखिन्छ, ईश्वर पोखरेल बिनाको सुरक्षा परिषद् बैठक राखेर ओलीले भारतलाई केही ठोस सन्देश दिन खोजेका छन्। यस्तो सन्देशलाई नेपालमा सर्वसाधारणले ‘लम्पसार’ भनेर बुझ्ने गरेका छन्।
सुरक्षा छाता भित्र राख्नु भारतको दिर्घकालिन लक्ष
नेपाल चीन तिर नलाग्ने प्रत्याभुतिका लागि कसरत गरिरहेको भारतले नेपालबाट उक्त कुराको प्रत्याभूति आएको हुन सक्ने भन्दै गोयलको भ्रमण र भारतीय सेनापतिको आशन्न भ्रमण एउटै उद्देश्य प्राप्तिका लागि भएको एकीकृत प्रयासको रुपमा गरेको देखिन्छ।
भारतले नेपाललाई उसको सुरक्षा पोल्टामा हाल्ने प्रयास विगत सत्तरी वर्ष देखि नै गरिरहेको छ। नेपाललाई उसको सुरक्षा छाता भित्र राख्नु उसको दिर्घकालीन लक्ष हो।
पछिल्लो समयमा भारतीय उच्च सुरक्षा अधिकारीका गोप्य भ्रमण त्यसको प्रभाव स्वरुप ओली सरकारका गतिविधिमा आएको फरकपनले भारत विश्वस्त हुन थालेको संकेतहरु देखिदैछ।
त्यसो त, गोयल आउने भएपछि सरकारले हातर हतारमा राष्ट्रिय सुरक्षा समितिको बैठक राखेको दावी केही स्रोतहरुले गरेका छन्। रक्षा मन्त्रीबाट ईश्वर पोखरेललाई हटाएपछिको राष्ट्रिय सुरक्षा समितिको पहिलो बैठक थियो बुधवारको बैठक।
अर्थात्, शक्तिशाली रक्षा मन्त्रालयबाट चीन निकट मानिएका पोखरेललाई हटाएकै दिन भारतीय सेनापतिको भ्रमण सार्वजनिक गरिनु, सार्वजनिकरुपमा हल्ला गरेर गोयल नेपाल आउनु र पोखरेल बिनाको सुरक्षा समितिको बैठक बस्नु संयोग मात्र होइन तारतम्य मिलाइएको हो।
अत्यमा, यी घटनाक्रमबाट के निष्कर्ष पुग्न सकिन्छ भने, नेकपाको आन्तरिक शक्ती संघर्षले केपी ओलीको कुर्सी हल्लिएको छ। उनको हल्लिएर धरापमा परेको कुर्सी जोगाउन ओली अचानक भारतसंग नजिकिन थालेका छन्।
विस्तारै विस्तारै दक्षिण तिर ढल्कदै लम्पसार पर्ने खेलमा ओली देखिएका छन्। उनको पछिल्लो ’मुभ’को अर्थ संकटमा गर्दै गएको कुर्सी जोगाउने नै हो भन्ने घटनाक्रमबाट देखिन्छ।
चीनको काखमा बसेको भनिएको ओली सरकारको यात्रा भारतको पाउतिर लम्किन थालेपछि यसले नेकपाको आन्तरिक राजनीतिमा के असर पर्छ भन्ने उत्सुकताको विषय भएको छ।
यो पनि पढ्नुहोस्, ओलीले रहस्यमय ढंगले कोल्टे फेर्दैछन् भारततिर..
Previous articleकोभिड-१९ : बीपी प्रतिष्ठानामा उपचार गर्न न्युनतम ७ हजारदेखि ६० हजारसम्म धरौटी राख्नुपर्ने निर्णय
Next articleअर्थमन्त्री पौडेलसँग ‘रअ’ प्रमुखको सबैभन्दा लामो र विशेष भेट
ट्रम्पलाई कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण देखिएन
थिमिमा सञ्चालित आयोजनाको निर्माण तीव्र गतिमा हुँदै
काेराेना अपडेट : थप ४४८ जनामा संक्रमण पुष्टि
कोभिड-१९ : वीपी प्रतिष्ठानमा महोत्तरीकी संक्रमित युवतीको मृत्यु
धरान, १४ मंसिर । वीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानमा उपचारको क्रममा कोरोना संक्रमित युवतीको मृत्यु भएको छ। बर्दिबास २ महोत्तरीकी २२ बर्षीया युवतीको आज...